Madaxweyne Farmaajo oo qalabbeeyey Isbitaalka Xoogga | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Farmaajo oo qalabbeeyey Isbitaalka Xoogga
Madaxweyne Farmaajo oo qalabbeeyey Isbitaalka Xoogga
Qeybta qaliinka ayaa lagu kordhiyay Isbitalka Xoogga Dalka oo dhismihiisa dhawaan la soo geba gebeeyey,iyadoo loogu talagalay in lagu qabto adeegyada Caafimaadka ee muhiimka u ah ciidanka Xoogga Dalka, Madaxweynaha Dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qalabbeeyey qeybtaan cusub.
Munaasabad kooban oo xariga looga jarayay qeybtan cusub waxaa ka qeybgalay wasiirka gaashaandhiga,Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka,Saraakiil iyo wakiilo ka socoday Dowladaha Caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Col. Mahad C/llaahi Shiine oo ah madax hoggaanka caafimaadka ciidanka Xoogga Dalka ayaa ugu horeyn faah faahiyay muhiimadda qeybtan qaliinka.
Danjiraha dowladda Turkiga ee Soomaaliya Olgan Baker iyo diblomaasiyiintii kale oo ka qeybgashey munaasabadda ayaa ammaanay dadaalka dowladda Soomaaliya ee u aadan dib u dhiska xarumaha muhiimka ah, gaar ahaan kuwa ciidammada.
Taliyaha ciidammada Xoogga ayaa aaminsan in tani ay qeyb Lixaad leh ka qaadaneyso dhismaha ciidanka xoogga dalka hadda socda.
Mudane Xasan Cali Maxamed (Amar-dambe) wasiirka Difaaca Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay kaalintii ay qaadatay dowladda Talyaaniga dhismaha qeybtan caafimaad, tanina ay bilow u tahay horumarinta adeegyada ciidamada Xogga dalka.
Previous articleMaamulka Degmada Dolow oo ka hadalay dhismaha Garoonka Dolow
Next articleUdiyaar garowga Munaasabada 26 June